Niala tamin'ny FSF i John Sullivan ary nisy fanovana natao ihany koa tamin'ny FSTR | Avy amin'ny Linux
Mandritra ny andro farany niroso ny tontolo loharano misokatra noho ny fanambarana nataon'i Richard Stallman momba ny fiverenany ho any amin'ny FSF izay olona an'arivony no nanandratra ny feony mba hahafahany mivoaka ny fikambanana noforoniny ary anisany am-polony taona maro lasa tandindona. Raha ny marina, taorian'ny fanehoan-kevitry ny Open Source Initiative (OSI), mpanohana rindrambaiko maimaimpoana an-jatony no nanao sonia taratasy misokatra nangataka tamin'ny mpanorina ny Free Movement hamerina ny apron azy, ary koa ny filankevitry ny rindrambaiko malalaka.
Raha etsy ankilany, olona an'arivony no naneho ny fanohanany tsy misy fepetra ary mikarakara izy ireo mba hanoherana ny tsindry ataon'ny Free Software Foundation.
Io no fijerin'ny olona manohana sy hita ihany, fa ny fiverenan'ny RMS ho any amin'ny FSF ihany koa dia nametraka andian-dahatsoratra iray tsy teo amin'ny rafitry ny FSF ihany fa koa amin'ireo vondrom-piarahamonina sy fikambanana isan-karazany.
Ary dia toy izany ny raharaha John Sullivan izay nanambara ny fametraham-pialany ho CEO an'ny Free Software Foundation, mipetraka hatramin'ny 2011 (ny antsipirian'ny vanim-potoanan'ny tetezamita sy ny antsipirian'ny famindrana ny fanaraha-maso ny talen'ny vaovao izay nampanantenain'i John fa havoaka ao anatin'ny andro vitsivitsy).
Taorian'ny 18 taona niarahana tamin'ny Free Software Foundation dia nanapa-kevitra ny hiala amin'ny toerako amin'ny maha-CEO ahy aho, mahomby amin'ny faran'ny fotoanan'ny tetezamita. Hizara antsipiriany bebe kokoa izahay, ao anatin'izany ny fampahalalana momba izany tetezamita izany, ary teny vitsivitsy hafa, amin'ny andro ho avy. Voninahitra lehibe ho anay ny nanompo an'ity andrim-panjakana ity sy niara-niasa tamin'ny mpiasa FSF, mpikambana ary mpilatsaka an-tsitrapo nandritra ny taona maro. Ny mpiasa amin'izao fotoana izao dia mendrika ny fahatokisanao tanteraka sy ny fanohanananao; Azo antoka fa manana ny ahy izy ireo.
Marihina fotsiny fa mahatoky tanteraka ny mpiasan'ny STR Foundation ary voninahitra lehibe ny nanompo ny Foundation ary niara-niasa tamin'ireo mpiasa, mpikambana ary mpilatsaka an-tsitrapo.
Mandritra izany fotoana izany, Kat Walsh, mpahay lalàna izay nandray anjara tamin'ny famoronana ny lisansa Creative Commons 4.0, Mpikambana tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Wikimedia Foundation izy ary tao amin'ny filankevi-pitantanana ny Xiph.org Foundation, nambara fa handao ny filankevi-pitantanan'ny Free Open Source Foundation.
Nasongadin'i Kat fa ny fialana dia tsy tokony hoheverina ho fandaozana hevitra rindrambaiko maimaimpoana. Ny fandraisana ny dingana dia avy amin'ny fahatakarana lava sy sarotra fa ny andraikitra notanananao tao amin'ny fikambanana dia tsy ny fomba tsara indrindra hampiroboroboana rindrambaiko open source ho an'izao tontolo izao. Mino i Kat fa mila fanovana ny Free Software Foundation mba hamahana ireo olana efa misy, saingy tsy izy no olona afaka nampihatra ireo fanovana ireo.
Ary koa iray amin'ireo fanovana natao dia mifanaraka amin'ny dingana naroso etsy ambony hanovana ny fitantanana ny STR Foundation, Geoffrey knauth, Filohan'ny STR Foundation, dia nanambara ny fampidirana mpikambana vaovao mifidy ao amin'ny filankevi-pitantanana hisolo tena ny hevitry ny mpiasa ary nofidian'ny STR Foundation. Ny filankevitra dia nanakarama mpandrindra rafitra Ian Kelling.
Ity dia dingana iray lehibe amin'ny ezaky ny FSF hanaiky sy hanohana ny fitarihana vaovao, hampifandray izany fitarihana izany amin'ny vondrom-piarahamonina, hanatsara ny mangarahara sy ny fandraisana andraikitra ary hanangana fifampatokisana. Mbola be ny asa mbola hatao, ary hitohy izany asa izany.
Fantatro hatrizay fa ny FSF dia manana mpiasa miasa tsara, miasa mafy, saingy miaraka amin'ny fahombiazan'ny LibrePlanet 2021, ary miresaka amin'ireo mpiasa nandritra ny resabe izay nivoatra avy hatrany taorian'izay, dia tsy isalasalana aho fa zava-dehibe ny fampidirana mpiasa bebe kokoa amin'ny ny fanapahan-kevitra. -Fanapahan-kevitra sy fifanakalozan-kevitra stratejika. Ny torohevitra natolotr'izy ireo tamin'ny herinandro lasa fotsiny dia tena sarobidy. Mino tanteraka aho fa ity dingana hanatsarana ny fitantanana ny FSF ity dia hitondra vokatra tsara kokoa amin'ny ho avy.
Ankoatr'izay, azo jerena fa ny isan'ireo nanao sonia ny taratasy ho fanohanana an'i Stallman dia nihoatra ny isan'ny nanao sonia ny taratasy - 3693 nosoniavina ho an'i Stallman, manohitra - 2811.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Niala tamin'ny FSF i John Sullivan ary nisy fanovana natao ihany koa tamin'ny FSTR
Ny Kongresy amerikana dia mitady sivana amin'ny Internet